Barashada Aqoonta Iyo Xikmada - Daryeel Magazine
Barashada Aqoonta Iyo Xikmada
Bismilaah mahad oo dhan alle ayaa iska leh waxaan salaamaya dhaaman umadda soomaliyeed meel kastay joogan marka xigta waxan sigaar ahaaned usalaamaya intii magacayga iyo muuqayga garanaysa.
Maqaal kan waxeynu ku milicsan doona qeybaha loo qeybiyo wax barashada, xidhiidh ka kadhexeeya aqoonta iyo xikmada ,sidoo kale, waxeynu ku eegi doona faa,idada akhris ku u leeyahay aqoon raadiyaha.
Aqoonta markaad maqasho waxyaabo badan ayaa maskaxdaada kusoo dhacaya. Aqoon macnaheedu waa faham ka ama barashada wax lagaranayo, aqoonta waxa loo bartaa si aad wax ogaatid waxyaabaha kugu hareeraysan . tusaale hawo ayaa inagu gedaaman waxeyna ka koobantahay saddex curiye oo kala ah , ogsijiin , kaarbon dhay ogsaydh iyo nitrojiin.
Haddaba aqoontu waxey salka ku haysaa in wax cusub kusoo kordhisi koon ka, soomaali ahaan aqoonta weynu barana , laakin, iskuma deynu iney wax cusub soo kordhino.
Waxbarasho ma dhamaato intaad nooshahay, sidoo kale, aqoontu waa wax lasoo ururiyey, la keydiyey, kadibna loo soo gudbiyo jiilasha.
Waxbarashada wax loo qeybiyaa labo :-
1. Waxbarashada toos ka ah ama rasmiga ah ( formal learning )
2. Waxbarashada aan toos ahayn( informal learning)
Waxbarashada toos ka ahi waa mid ubaahan iskuul, macalin, iyo ardey. Tusaale : waxbarashada toos ka ahi waxey ka bilaabantaa fasal ka 1aad ilaa heer jaamacadeed.
Waxbarashada aan toos ka aheyni waa aqoon aan ubaahneyn macalin,iyo iskuul. Aqoonta noocan ahi waxa la gerdaadiyaa markaad wax kala garato, laga bilaabi xiligaas waxaad wax kabaranaysaa dhacdooyin ka nolosha. Tusaale : sida dad ka loola dhaqmo, sida loo noolaado iyo sida masuuliyad loo qaado.
Haddaba ujeedada ugu weyn ee waxbarashada aan toos ka aheyni waa inaad barato sida aad unoolaan laheyd , dad kana udhex gashid.
Xidhiidh ka kadhexeeya aqoonta iyo xikmada badanaa dad ku waxey isku qaldaan labadaas. Barasho( learning ) macnaheedu waa si aad uheshid aqoon waxna uga baratid caalam ka, bili,aadam ku waa xayaawaan ka keliya ee wax barta.
Aqoonta waxa lagu qeexa warbixin aad fahamtey ama xirfad aqooneed oo kugu lamaan, sidoo kale, Aqoontu waa waa laydh kuu iftiiminaysa madow ga si ay kuu tusto wadiiqada toos ka ah.
Hadaf ka ugu weyn ee aqoonta loo bartaa waa in naftaada ku fahamto iyo iney wax kaa barto dabeecadaha kala duwan ee makhluuqaad ka, aqoontaad baratey waa iney kuu noqoto jiheeye ( compass) kugu hagaya wadada sax da ee nolosha.
Xikmadu waxey ku taxaluq daa aqoonta oo aad si wanaagsan u adeegsatid ama u isticmaashid, xikmadu waxey awood kuu siineysaa inaad noqoto qof fahamkiisi aad usareeyo iyo inaad go,aan qaadato adoo kala doorasho wacan adeegsanaya.
Bulshada aqoonta iyo xikmada usaaxiib ka ahi wey ka caqli badan yihiin bulshada aan looga sanqadhin aqoonta, aqoontu ma dhammato marxalado kala weji ah ayaad u martaa si aad wax u baratid laga bilaabo dugsiga hoose, dhexe, iyo ka sare markaad dhamaysato waxaad uban baxeysa heer jaamacadeed adoo aqoon taada balaadhinaya waxaad baranaysaa kuliyadahan. Sida injineer nimada, dhakhtar nimada, xisaabiye, maamule, dhaqaalayahan,taarikh yahan iyo qoraa.
Intaad wadaada cilmiga ku jirto waxyaabo badan ayaad baraneysaa halkaas na waxa si maldahan usoo galaya aqoonti aan toos ka aheyn (informal learning).
“ inbadan oo aad wax barataa, waxey kuu saamaxeysaa inaad noloshaada nidaamiso iyo inaad la qabsato deegan kasta”.
Saddex da weji ee bar bilow ga u ah aqoon ta.
1. Xaqiiq da ( facts) : macnaha xaqiiq waa wax run ah ama dhab ah. Tusaale haddii maanta qof wax kaaga sheego cilmiga dhakhtar nimada isna takhasus kiisu yahay injirneenimada, lagama yaabo inaad muhiimad badan siisayso odhaahdiisa waa sida ay dad ku ubadan yihiine.
2. Fikrad ama ra’yi ( concept): waa fikrad ku saleysan xaqiiq dhab ah, sidoo kale waa ka fiirsasho xeel dheer ayaa sameysa fikrad taam ah.
3. Guud ahaan sho( generalization): waa odhaah, xeer ,fikrad, laakiin, kuwo kamid ah aan xaqiiq ku saleys neyn. Tusaale , waxaad rabta inaad ogaatid waa maxey sabab ta afrika unoqotay qaarada ugu faqiirsan caalam ka? Baadhitaan ka dib waxaad ogaatey saddex dan shey iney saldhig uyihiin dib udhacaas.
1. Qadar ka jaahilnimo oo kor ukacay
2. Iyadoo aaney dimiqraadiyad jirin, iyo
3. Musuq-maasuq aafeeyay, iyo khilaafad ka dhex aloosan.
Saameyn intee leeg ayay warbixina iyo macluumaad ka aad helayso ku yeelanaysaa aqoonta, (information and data).
Aqoontu waxey ka kooban tahay warbixino iyo macluumaad la uruuriyey, si ay aqoon taadu xaqiiq unoqoto kalsoonidaaduna u korodho waa inaad iska hubiso warbixina iyo macluumaad ka aad ka helayso.
Qoddob ka ugu horeeya ee aad isku hubisid waa inuu noqdaa warbixinta ama warar ka aad ka heshay inuu xaqiiq da ku fadhiyo iyo in uu been raad leeyahay. Baahiyaha ( TV) ama idaacadu ( radio ) waa ilaha laga helo warbixinta, sidoo kale internet ku isna waa il laga helo warbixinta.
Macluumad ku waa isha laga aamini karo in warbixintaasi dhab tahay iyo inkale. Tusaale waxa jira buugaag iska hor imanaya midba wax gaara ayuu kuu sheegaya, laga yaaba inaad ku wareerto kaad qaadan lahayd ama aad aamini laheyd. Marxaladaas waxaad samey karta mid kasta gaar ayaad ubaadhaysa adoo ka foojignaaya inaad isla markiiba aad aaminto labaad iskhilaafaya midkood.
Saddex da hab ee macluumad loo ururiyaa waa :
1. Hab su,aalo weydiin ah ( questionnaires)
2. Indho-indheyn ( observation )
3. Iyo in koox doodeysi ah lasameeyo ( group discussion)
Faai,dada akhrisku uleeyahay aqoonta.
Akhris ku wuxuu udhexeeya akhriyaha iyo waxa la akhrinayo, waxyaabaha aad akhrsi waxey noqon karaan buug,jaraa’id, kitaab IWM.
Ujeedada aad wax u akhrinaysaa waxey noqon kartaa, madadaalo,cilmi korodhsi, wakhti lumin IWM. Dad ka wax kale gedisan akhriyaa waxa lagu tilmaama dad ka caqliga usaaxiib ka ah. Sidoo kale waxa la tilmaama qof ka wax akhriyaa wuxuu jiraa saddex qarni. Cajiib ! side ujiraa waxa weeya.
1. Qarni tegay wuux akhrinaya buugtii laga qoray wuu la noola dad kaas.
2. Qarniga jooga wuux akhrinaya buug ta laga qoray ama se indhiisa u macalina ah.
3. Qarniga kasoo socda oo waa uu saadaalin karaa rajada aayaha.
Sidoo kale haddaad rabto inaad noqoto qore wanaagsan waa inaad ahaata akhriye wanaagsan. “ maalinta aad iskuul ka aad joogto ama jaamacada waa iney noqotaa maalin wax cusub soo korodhsato, sidoo kalena, wakhtiga aad ka maqantahay goobaha waxbarashada waa iney noqotaa wakhti aad wax baraneyso – si aad tan usameyso waa inaad wakhtigaaga maamusha”
gunti iyo gebi-gebidi, waxan naftayda iyo nafihiinaba kula talinaya in alle towbada ina waafajiyo kuwi alle ka raali noqdana inaga dhigo wa bilaahi tawfiiq.
Qalinki : – C/xakiin C.laahi Aaden dheere
Email = abdi.177@hotmail.com
Adeega Mybridge Ee iPhone Waa Macalin Horumariya Aqoonta Iyo Xirfadda Dadka Ku Shaqeeya Tiknoolajiyadda Akhrisku Waa Furaha Aqoonta, W/Q: Maxmed Badel Cali “Taqwiim” Xikmada Maanta Iyo Mahatma Ghandi Xikmada Todobaadka